रक्त क्यान्सर पीडित बालकको उपचारका लागि रकम अभाव » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १२:०८ मा प्रकाशित !
पर्वत, १७ वैशाख ।
रक्तक्यान्सर रोगबाट पीडित यहाँको एक विपन्न परिवारका बालकको उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको छ ।
उपचारका लागि डाक्टरले झण्डै रु २० लाख लाग्ने भनेपछि अहिले सहयोग जुटाउनका लागि परिवारले सबैसँग अपिल गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय छिमेकीले सहयोग संकलनका लागि अभियाननै सञ्चालन गरेका छन् । अहिलेसम्म झण्डै रु दुई लाख संकलन भएको स्थानीय शिक्षक सुरेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत अर्जुनको तीन महिनादेखि उपचार गराउनुपर्दा वार्षिक परीक्षा दिनबाट समेत वञ्चित बनेका छन् । उनी अहिले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुन् । मजदूरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएको परिवारमा यति ठूलो पीडा परेपछि बाबुआमासमेत चिन्तित बनेका छन् । उपचार गरौँ भने आफूसँग पैसा छैन, नगरौँ भने छोराको ज्यानै जाने भयो अर्जुनका बाबु सुकराज गौतमले भने, “कतैबाट सहयोग पाएमा सहज हुने थियो ।”
उनको उपचार गर्न जुटाउनका लागि गाउँलेले सदरमुकामस्थित ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता खोलिदिएका छन् । सहयोगीलाई उक्त बैंकको खाता नम्बर ६६०७०१०००२४१५ मा जम्मा गरिदिन पनि अपिल गरिएको छ । जति छिटो रकम जम्मा ग¥यो त्यतिनै छिटो शल्यक्रिया गर्ने भनेर डाक्टरले ताकेता गरेकाले परिवारसहित गाउँले अभियाननै सञ्चालन गरेका छन् । तर पनि पर्याप्त सहयोग जुटाउन नसकिएको स्थानीय सुरेन्द्र गौतमले बताए।
PREVIOUS POST Previous post: पदाधिकारी नियुक्त गर्न बोलाइएको कांग्रेस बैठक स्थगित
NEXT POST Next post: यस्तो छ आज बिदेशी मुन्द्राको विनियम दर
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १२:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १२:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १२:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १२:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १२:०८